ရန်တိုက်ပေးတဲ့ ခရစ်ယာန် တွေအတွက် ဒဲ့မေး ဒဲ့ဖြေ ~ Knowing the Ture God
Knowing the Ture God
ရန်တိုက်ပေးတဲ့ ခရစ်ယာန် တွေအတွက် ဒဲ့မေး ဒဲ့ဖြေ
7:52 AM Myanmar Elite Hacker7comments
အင်း - - - ဥာဏ်ကြီးရှင် ခရစ်ယာန်တွေ - - - -
ခုထိ- - - - တခြား ဘာသာ အခြင်းခြင်း ရန်တိုက် ပေးနေတုံးပါလား - - - - -
ထမိန်ခြုံမနေပါနဲ့တော့ကွာ- - - - မင်းရဲ့ မုတ်ဆိတ် တစွန်းတစ က ထမိန် ထဲကနေ ထွက်နေတယ်..
ကဲ..ထားပါလေ - - - အဲဒါတွေရှောက်ပြောနေရင် - - - အောက်က မေးခွန်း တွေကို..မဖြေနိုင် လို့ထင်နေဦးမယ်..
ရန်တိုက် ပေးတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေ အတွက် ဒဲ့မေးသလို - - ဒဲ့ပဲဖြေမယ် - - -
(က) ကိုငပျင်းကပြောတယ်..အစ်ကိုတို့ဘာသာမှာ....starting point လဲမရှိဘူး..end point လဲမရှိဘူးတဲ့..အဲဒါဟုတ်လား.....
ဟုတ်တယ်.. သံသရာဆိုတာအစအစွန်းမထင်လို့... မြတ်ဗုဒ္ဓကဟောခဲ့တယ်...
(ခ) အစ်ကိုတို့ ကထာဝရဆိုတဲ့စကားကိုငြင်းထားတယ်နော်.....မှတ်မိအောင်ပြန်ပြောရတာပါ.............
(ကိုထူးကိုအစ်ကိုပြောသောစကား)ဒါပေမဲ့ ညီမင်းကံတော်တော်ကောင်းတဲ့ကောင်ပဲ ကမ္ဘာ. နည်းပညာရှင်များအသင်းက စကြာင်္ဝဌာ အနန်တမှာ ထာဝရ တည်မြဲနေတဲ့ အရာဆိုတာ ဘာတစ်ခုမှ မရှိဆိုပြီး ကမ္ဘာကိုကြေငြာလိုက်တော့ ဘုရားသခင်ရော ၀ိဥာည်တော် အယူအဆ တွေအားလုံး တောမှာပဲသွားပြောတော့ဆိုပြီးဖြစ်ကုန်လို. အစ်ကို့စကားအစ်ကိုတာဝန်ယူနော်................
အဲဒီစကားကို ငါ-ပါ တာဝန်ယူတယ် - - - ထာဝရမြဲတဲ့အရာ- - - ငါ့တို့ ကိုယူလာ ပြစမ်းပါ - - -
မြဲတဲ့ အရာတစ်ခု ပဲရှိတယ်.. အဲဒါက မမြဲခြင်း ကိုယ်တိုင်ပဲ
(ဂ)အစ်ကိုထူးကပြောတယ်........ သူတို့ဘာသာ မှာရှိတဲ့.. နောဧ...ဧဗြဟံ... မောရှေ.. ဆိုပြီးတော့.ပြောတယ်........
.ထာဝရဘုရား ရှိကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ သက်သေတွေလို့... အဲဒီဟာတွေရဲ့ သက်သေတွေအထောက်အထားတွေနဲ့ပြောပါတယ်.... တကယ်လဲအဲဒီနေရာတွေမှာတွေ့ရပါတယ်.....
ဘယ်ဟာကို ပြောတာလဲ ညီလေး..ဘယ်သက် သေတွေလဲ..
ကိုထူးပြောခဲ့တဲ့ - - အရာတွေ အကုန်လုံးမှာ - - ဘာသက် သေမှမပါဘူး - - ကျမ်းစာ ကအကြောင်း တွေချည်းပဲ ပြန်ပြော သွားတာပဲ
(မင်းကလဲ..ဘာလို့..အခြား ဘာသာတွေကြားထဲမှာ ၀င်ပြီး နှစ်ဖက်ချွန် နေရတာလဲ.. အခြောက်ယိမ်း လာ က နေတာလား)
၄ ဆူဆိုတာ... ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့သက်တမ်းမှာပွင့်ခဲ့တာကိုပြောတာ.. အဆုံးအစမရှိတဲ့ သံသရာစက်ဝိုင်းမှာ..
ကမ္ဘာပေါင်းမြောက်များစွာမှာပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားပေါင်းက ဂင်္ဂါမြစ်ဝှမ်းရဲ့ သဲတွေထက်များနေပြီ
သက်သေ ကတော့ တရား ဓမ္မတွေပဲရှိတော့တယ်... အဲဒီတရား ဓမ္မအနှစ်သာရကြောင့် faith အဖြစ်နဲ့ ယုံကြည်နေကြတာ..
ရုပ်ဝတ္တုသက်သေ တွေကတော့..အနတ္တပဲလေ... ပျောက်ကွယ်ခဲ့ပြီ..
အဲဒီအတွက်.. မင်းလက်ခံချင်လဲရတယ်.. လက်မခံလဲဖြစ်တယ်.. မယုံလို့လဲအပြစ်မဖြစ်ဘူး..ယုံလဲအပြစ်မဖြစ်ဘူး..
(ဃ)ရှင်တော်ဂေါတမသည်..သူ့.ကိုသူဘုရားလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသလား............ လောကမှာအတော်ဆုံးလို့ကောပြောခဲ့ပါသလား..........(အစ်ကိုသေချာစဉ်းစားပြီးမှရေးပါနော်..သတိပေးတာပါ) သံသရာအကြွေးမကြေရင်ကော ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်နိုင်ပါသလား...............................
ဒို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေ ယူဆတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဓိပါယ် က enlightenment ကွ - - God မဟုတ်ဘူး - -
လမ်းပြဗုဒ္ဓကွ - - - ကယ်တင်သူ ( Power Ranger ) မဟုတ်ဘူး ကွ - - -
အဲဒီတော့ - - -
ဘုရား ဆိုတဲ့ အနက် အဓိပါယ် မြန်မာလိုဖွင့်ဆိုခြင်းဟာ - - - ကယ်တင်ရှင် ဖန်ဆင်းရှင် ( Power Ranger ) မဟုတ်ဘူး - - - လမ်းပြ ဗုဒ္ဓ လမ်းမှန် ကိုပြပေးတဲ့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ ဘုရား - - - - -
အဲဒီတော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရား ဟာ God ဘုရား လုံးဝ (လုံးဝ) မဟုတ်ဘူး - - - လမ်းမှန်ကန် ကိုပြပေးခဲ့တဲ့ မဟာလူသား Enlightenment ဘုရား သာဖြစ်တယ် - - -
ဒို့ဘာသာမှာ. သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူသော ဘုရားလို့ပြောတယ်..
တရယ်တော့4Nobel Truth ဆိုတာ ရှိပြီးသားတရားတွေပါ.လူတွေသိသိ မသိသိ အမြဲမှန်ကန်နေမဲ့ တရား တွေဖြစ်တယ်..
အဲဒါကို..ဗုဒ္ဓက ဥာဏ်တော်နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီး..လူတွေကိုပြန်ဟောတယ်.. သတိသံဝေဂရတဲ့သူတွေ..ရဟန်းဝတ်တယ်..
ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတာတော့ အဲဒီလိုပဲ - -
ဘယ်ဟာပဲအရင်လာလာ - - - အရေးကြီးလို့လား အကုန် တူတူ ပါဘဲ။ ဘယ်ဟာ အရင်လာလာ အရေးမကြီးဘူး ။ အကုန် အတူတူ ဘဲ။
၁။ လူသားအစ ဗြဟ္မာက ဆိုက ဗြဟ္မာအစ ဘယ်ကပါလဲ အကျိုးအကြောင်း ခိုင်လုံစွာဖြင့် ဖြေကြားပေးပါ။
အန္ဒူ ကမ္ဘာတည်ကျမ်း ကဟာတွေ... အဲဒါတွေကို သီဟိုဠ် သံဃာယနာတင် တဲ့အချိန်မှာ.. သီဟိုဠ်က အိန္ဒိယရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးမှု ကိုခံခဲ့ရတယ် .. အဲဒီအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာ အိန္ဒူ ကျမ်းတွေနဲ့ရောရှက်ယုံကြည်သူတွေရှိနေတယ် - - -
ဥပမာ - ဘယ်လို လူတွေ ယုံကြည်လဲ ဆိုတော့ - မင်းတို့ လို ခရစ်ယာန်တွေပေါ့။
အဲဒါဟာလဲ - - - မသိမှုကြောင့် ယုံကြည်နေကြတာပါ ခရစ်ယာန်တို့ - -
ငါးရာ့ ငါးဆယ် နိပါတ် ကိုလဲ တစ်ခါတဲ ပြောပြလိုက်မယ်... ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ..မျောက်တွေ၊ ငှက်တွေ၊ ကြက်တွေ၊
စကားပြောကြပါလား... လို့မေးရင်ဖြေစရာရှိတယ် - - - (နောင်မင်းမေးရင်..ဖြေစရာမလိုအောင်လို့)
အဲဒီငါးရားငါးဆယ်နိပါတ်ဆိုတာ..မြတ်ဗုဒ္ဓက သတ္တ၀ါတစ်ဦး တစ်ယောက် ကိုဆုံးမ ရင်ထင်သာ မြင်သာ ရှိအောင်လို့ - - ဥပမာ ပေးပြီး ဆုံးမတဲ့ အဖြစ်အပျက် လေးတွေရှိခဲ့တယ်.. အဲဒါတွေကို.. သီဟိုဠ်သားတွေက.. ဇာတ်လမ်း အသွင်ပြန်ရေးခဲ့ကြတာ ။
ဥပမာ အဖြစ်အပျက်ထဲက .. ဘုရင်တွေကို နာမည် ပေးခဲ့ကြတယ်၊ တိရိစ္တာန်တွေကို.. စကားပြောစေခဲ့ကြတယ်.. (အဲဒါကြောင့်တိုင်းမသိဗာရာဏသီ ဘုရင်မသိရင် ဗြဟ္မဒတ် လို့တောင်) ပြောစမတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်..
၂။ ကံတရားအတိုင်း လူသည် ခံနေရပါက အရင်ဦးဆုံးကံမရှိမီ အဘယ်က ကံရောက်လာပါသနည်း။
ညီလေး.. အဆုံးအစမရှိဘူးဆိုမှတော့ - - အရင်ဦးဆုံးဆိုတာ - - - ရှိပါဦးမလား - - ကံမရှိမီတို့ - - ကံရှိပြီးတို့ - - -
အဲဒါတွေလဲမရှိဘူး Period မဟုတ်ဘူး Cycling ပါ.။အဲဒီမေးခွန်းက - - မေးစရာမလိုတော့ဘူးလေ - - ငါတို့ က ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ။ ဖန်ဆင်းရှင် အယူအဆ တွေနဲ့ ရောထွေး မမေးပါနဲ့ ။
၃။ ဂေါတမသည် ဘုရားအဖြစ် ဆုပန်ရာတွင် ဘုရားကိုလည်း ဖူးတွေ့မှ ဆိုသောကြောင့် ဦးဆုံးဘုရားသည် အဘယ်ဘုရားထံမှာ ဆုပန်ခဲ့သနည်း။
လာပြန်ပြီညီလေး..အပေါ်ကအဖြေလေးလိုပဲ - - - သဘောတရားချင်း - - - အရင်ဦးဆုံးတို့ နောက်ဘိတ်ဆုံးတို့ - - -
နောက် ဘိတ်ဆုံးရဲ့ ဘိတ်ရှေ့တို့ - - - ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမရှိဘူးလေ..သံသရာလည် ခြင်းမှာ `လည်´ တယ်ဆိုတာကို သတိပြုမိဖို့ လိုတယ် - - - ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒနဲ့ Original Concept တော့ တူမှာမဟုတ်ဘူး
၄။ ရုပ်၊ နံ မရှိဆိုသော ရူပ ဘုံ၊ အရူပဘုံမှ ရုပ်မှရှိ၊ နာမ်မရှိသည်ကို အဘယ့်ကြောင့်သတ္တ၀ါဟု သက်မဲ့ကို သုံးသနည်း။ သက်မဲ့သည် သတ္တ၀ါ မဟုတ်။ အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံစွာနှင့်ဖြေကြားပေးပါ။
သေသေချာချာဖတ်နော် ခရစ်ယာန် တို့နည်းနည်း ရှုပ်မယ် - - -
ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှာ (၂) ပိုင်းရှိတယ်.. လောကီတရားနဲ့ - - - လာကုတ္တရားတရား
လောကီတရားမှာ - - - ငါးပါးသီလအပါအ၀င် - - မိဘ၀တ် ၊ သားသမီးဝတ် ၊ စသဖြင့်လူတွေ ကျင့်ဆောင် ရမဲ့ဝတ္တရား တွေကို ဆုံးမ ခဲ့တယ် ။
အဲဒီမှာ သူ့အသက်မသတ်ရဆိုတဲ့ သီလ တစ်မျိုး ပါတယ် ။ အဲဒီအထဲက `အသက်´ဆိုတဲ့ စကား လုံးဟာ
လူ့ဘောင် မှာရှိတဲ့ လူတွေ အကြမ်းဖျဉ်း နားလည် ထားတဲ့ လှုပ်ရှား သွားလာမူတွေ ပါတယ် ။ စားတယ် ၊ လေရှူတယ် ၊ မေထုန်မှီဝဲတယ် ၊ မျိုးပွားတယ် ဆိုတဲ့ - - -သက်ရှိ ဂုဏ်အင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေလို့နားလယ်ထားတယ် - - -
အဲဒါကို သတ်ဖြတ်ခြင်းမပြုရဘူး - - - ( အဲဒါက လူ့ဘောင်စည်းကမ်း ၊ သံသရာက လွတ်မြောက်ခြင်း တရား မဟုတ်ဘူး )
အဲဒါက လောကီအတွက် - - - လူ့ဘောင်အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် - - - သံသရာက ထွက်မြောက်ဖို့ အတွက်မဟုတ်ဘူး
တနည်းဆိုရင် - သံယောဇဉ် ဆိုတဲ့ အနှောင်အဖွဲ့တွေက မရုံးထွက်နိုင်ကြသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ။
--------------------------- x --------------------------- x --------------------------------- x ---------------
လောကုတ္တရာမှာတော့.. အသက်အကြောင်းကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက မဟောဘူးကွ - -
အသက်ရှိတယ် - - မရှိဘူး - - - ၊ ရှင်တယ်မရှင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူး - - -
ဒို့ လူသားတွေဟာ - - ရှင်တယ်လဲမဟုတ်ဘူး - - - မရှင်ဘူးလဲမဟုတ်ဘူး..
Compound of Matter ခန္ဓာငါးပါးအစုအဝေး ( ရုပ် Matter တွေစုဖွဲ့ထားတဲ့ အစုအဖွဲ့ ) လို့ပဲမြင်တယ် - -
အဲဒီ Compound of Matter.
အဲဒီတော့ ရုပ်မရှိ ဘဲတည်နေတဲ့ဘုံတွေ၊ နာမ်မရှိပဲ တည်နေတဲ့ဘုံတွေ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် - - -
ရုပ်အစုအဝေးတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အမြင် (နီးစပ်တဲ့သဘောကတော့ Physics အမြင်)
ပေါ့ကွာ... ဒို့မျက်လုံးတွေတောင်..3Dimensional Object ရဲ့ အလင်းပြန်ရောင်စဉ်တမ်းတွေကိုပဲ
အမြင်အာရုံအဖြစ်လက်ခံ နေရတာမဟုတ်လား - - ဒါတောင်ဒို့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့ Ray တွေအများကြီးရှိသေးတယ်လေ
အဲဒီမှာ ဒို့မျက်စေ့နဲ့ဒို့အာရုံနဲ့ ဒို့ဥာဏ်ရည်နဲ့ စဉ်းစားလို့မရပေမဲ့ - - ရှိနေကြတဲ့ ဘုံဘ၀တွေအများကြီး - - ဘယ်ဘုံ ဘယ်ဘ၀ မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးသည် သတ္တ၀ါ တွေလို့ ယျေဘုယျသဘော သုံးနှုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ လူသည် သဘာဝ အလျှောက် ပေါ်လာပါက အဘယ့်ကြောင့် ငရဲနောင်တမလွန် ရှိရန်လိုပါသနည်း။
( ၁၉၇၄ ခုနှစ်ထုတ်အရှင်ဥက္ကဋ ၏တပည့်ရေးသားချက်များနှင့်မဖြေမိရန်လဲပြောပါရစေ )
သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့ အပြစ်၊ တွေကို..သဘာဝအလျောက်အပြစ်ပေးဖို့အတွက်.. သဘာဝအလျောက်ပေါ်လာတာဖြစ်မှာပါ..ငရဲကိုလိုအပ်တာမဟုတ်ဘူး.. လိုအပ်ချက်ကြောင့် ငရဲနောင်တမလွန်ပေါ်လာတာပါ..
လူဆိုသော အကျိုးကြောင့် - ငရဲဆိုသောအကြောင်းဖြစ်လာတာ..
၆။ မိမိကိုသာ အားကိုရာဆိုက ဘုရားမှတပါး အားကိုးရာ မရှိဟု အဘယ့်ကြောင့်ပြောကြပါသနည်း။
မိမိကိုယ်သာအားကိုရာဆိုတာ.. - ဘုရားက ဆုံးမခဲ့တာ
ဘုရားမှတပါးကိုးကွယ်ရာမရှိဆိုတာ - လူပြိန်း တွေပြောတာ - -
၇။ ပုထုဇဉ်သည် အဘယ်သို့ ဘုရား အထူးခံခြင်းကို နှစ်သက်သောကြောင့် အပြစ်မဖြစ်ရသနည်း။
ဘယ်ဘုရားမှ - - ၀င်ပြီမးခံပေးဘူး - ကိုယ်လုပ်တဲ့အပြစ် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ခံရမှာ - - အပြစ်တော့ မကင်းကြဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ - - -အပြစ်အနည်းအများတော့ ကွာတာ ပေါ့ကွာ..စောင့်ထိန်းနိုင်ရင် စောင့်ထိန်းနိုင်သလို.. ကောင်းမှု..ဆိုးမှု..
နှစ်ခုမှာ တစ်ခုခု တော့များနေမှာပေါ့.. အပြစ်ကိုကြီးတစ်ဖက်သတ်မကြည့်နေပါနဲ့..မင်းဆိုးတာလုပ်သလို..
၈။ ဂေါတမက “ငါ့ပြောသလိုကျင့်ပါဟု´´ဆိုလျှက် အဘယ့်ကြောင့် မကျင့်ဘဲ ကိုးကွယ်နေသနည်း။
ကျေးဇူးရှင်ကို ဂါရ၀ပြုတာ.. ထာဝရအသက်ကိုတောင်းဆိုးနေတာမဟုတ်ဘူး.
(အဲဒါဟာ ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကြားကကွာဟချက်ပဲ)
၉။ နိဗ္ဗာန်ဟူသည် ရှိသည်၊ မရှိသည် ဂေါတမက မပြောဟု ပြောလျှက်နှင့် အဘယ့်ကြောင့် မှန်းမျှော်နေသနည်း။
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ.. ဘာမှမရှိတော့တဲ့.ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတရားပါ.. နေရာ၊ ဘုံဌာနမဟုတ်ပါဘူး..
၁၀။ သတ္တတဒိဌိ နှင့် ဥစ္ဆေဒဒိဌိအကြားမှာ နေသည်ဆိုရုံဖြင့် သံသရာက လွတ်မည်လော။
၁၁။ ရူပ ဗြဟ္မာဘုံကိုတွေ့ပြီဟု ကြေငြာသံ ကိုအခုထက်ထိ မကြားသေးပါ။ (အလင်းနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကိုကြည့်လို့ရနေပြီကို ...... အစ်ကိုလဲသိတယ်နော်)
မင်းရူးနေလား.. Voyager2တောင် နေအဖွဲ့အစည်းအစပ်ပဲရှိသေးတာ...
အခြား..Solar system တွေကို ရောက်ဖို့နေနေသာသာ.. ကြယ်စုတွေလောက်ပဲကြည့်လို့ရသေးတာ..
Life Zone ကို ချဉ်းကပ်လေ့လာဖို့နေနေသာသာ.. ဒို့နေအဖွဲ့အစည်းအပြင်ကိုတောင်မထွက်နိုင်သေးဘူး..
Hubble Image တွေအရ..မှန်းဆချက်တွေ..Hypothesis ပဲရှိသေးကြတာ..
မင်း Astronomy အကြောင်း ဘယ်လောက်လေ့လာဖူးလဲညီလေး..
ရူပဗြဟ္မာ ဆိုတာ Asteroid လို့ယူဆရင်လဲ မှန်တယ်..
တကယ်တော့.. Science အရကြည့်မယ်ဆိုတာ.. ဗြဟ္မာ ၊ နတ်၊ တွေဟာလဲ ဒီနေ့ခေတ်စကားအရ Alien ပဲ
၁၂။ အရှင်ဥာဏ၏ “ သူမဟုတ်သော သူဝင်စားသည်´´ ဆိုသော စကားက မာရ်နတ်၏ လှည့်ကွက်ဖြင့်လျှက် အဘယ့်ကြောင့် မှိုင်းတိုက်ထားသော သံသရာကို ယုံကြည်နေရသနည်း။
ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာနေတာ အရှင်ဥာဏရဲ့ စကားကိုလိုက်နာနေတာမဟုတ်ဘူး..
၁၃။မိမိပြုလုပ်သောကောင်းမှုကိုသူတပါးအားပေးလို့ရမရ။ (သို့)မိမိကလက်မခံရင်ကောပေးလို့ရမလား။။။ ကြောင်းကျိုးနဲ့ဖြေပေးပါ။
မင်းဟာ..သူတပါးပေးကမ်းစွန့်ကြဲတာကို..ပေးကမ်းသူထက်ပင်ပိုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အုံး... မင်းမှာ..ကောင်းတဲ့စိတ် အစဉ်လေးဖြစ်မယ်.. အဲဒါကြောင့်ပဲ.. မင်းဟာ.. မင်းရဲ့ကောင်းတဲ့ စိတ်ကြောင့်ပဲ. .ကောင်းကျိုးခံစားရမယ်..
အဓိကက..မိမိစိတ်ပဲ... မင်းဘယ်လောက်ကြီးပဲပေးကမ်းပေးကမ်း.. သဒ္ဒါတရား..ပေးချင်ကမ်းချင်စိတ်မရှိပဲ
အမျှဝေတယ်ဆိုတာ. ၀မ်းမြောက်နိုင်အောင် အသိပေးတဲ့သဘော.. ပေးခြင်းယူခြင်းအတွက်..စရံသတ်တာမဟုတ်ဘူး..
၁၄။ သိပ္ပံသည် ဗုဒ္ဓ၏ ဟောချက်များကို မမှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြနေချိန်တွင် သိပ္ပံမှားကြောင်း သက်သေပြပေးပါ။(နေ။လ။ကမ္ဘာနှင့်သူတို့၏အရွယ်အစားယူဇနာများနဲ့လည်ပတ်ပုံ။။အစရှိသည်ဖြင့်ပေါ့)
ဒွတ်ခပဲ... မင်းကလဲပြောလေဝေးလေပဲ.. ဗုဒ္ဓက.. Cosmology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုမှမဟောခဲ့ဘူး..
အဲဒီတော့..သက်သေပြစရာမလိုသလို.. ဗုဒ္ဓ မှားတယ်လို့ပြောစရာလဲမလိုဘူး..
၁၅။ ငါသည်သင့်ကို မကယ်နိုင်ဟု ဆိုသော ဂေါတမအား အဘယ့်ကြောင့် နေ့ရက်စဉ် တောင်းဆုပန်နေပါသနည်း။ (အစ်ကိုတို့ဘာသာမှာဆုတောင်းခြင်းရှိမရှိ။။။(သို့)။။ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆုပန်ခြင်းသည်ဘယ်လိုကွာခြားပါသလဲ)
တကယ်ပြောရရင်တော့..ဆုတောင်းတာမရှိဘူး.. ကိုယ့်ထက်ကြီးမြတ်တဲ့လူရှေ့မှာ.. ရည်ရွယ်ချက်ကို ခိုင်မြဲအောင် Remind လုပ်တာပဲရှိတယ်.. အဲဒီသဘောပဲ... ကိုယ်ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အတွက်.. ဘယ်ဟာကို ရည်ရွယ်သလဲဆိုတာ. စိတ်က (နှုတ်က) ရည်မှတ်တာ..
အဲဒါဟာ..ဘယ်ဟာအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ရည်ရွယ်တာ.. တနည်း ဆုတောင်းတာပေါ့ကွာ..
အဲဒီတော့... အဲဒါကိုဆုတောင်းတယ်လို့မင်းယူဆရင်..ဆုတောင်းတာရှိတယ်ပေါ့.. မယူဆရင်လဲမရှိဘူးပေါ့.
၁၆။ ရုပ်တုဟူသည် အသက်မရှိသည်ကို ကလေးပင် သိသလို ၊ မကြံစည် အပ်ကြောင်း ဂေါတမက ပြောလျှက်နှင့် အဘယ့်ကြောင့် ကြံစည်သနည်း။
ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူး - - မြတ်စွာ ဗုဒ္ဓ ကို အထိန်းအမှတ်ပြုတာ။
နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုတာဟာ - နိုင်ငံတော်ကိုအလေးပြုတာလို့ခံယူသလိုမျိုး ၊ အရုပ်ကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူး ၊ ဂုဏ်အရည်အချင်းရှိသူတစ်ဦးဦးကို ၊
၁၇။ မကြံစည်အပ်သော အရာ လေးပါးတွင် ပါလျှက်နှင့် အဘယ့်ကြောင့် ဘုရားကို ကစားစရာသဖွယ် တွေးဆပြုအား မတရားသဖြင့် ပြုလိုပါသနည်း။
ဟား..ဟား... အထိန်းအမှတ်လုပ်တာပါဆို.. အပေါ်ကဟာလေးကိုပဲပြန်ဖတ်လိုက်..လက်ညောင်းလာပြီ
၁၈။ ဂေါတမ၏ တထွာသည် သာမန် ယောင်္ကျားကြီး သုံးထောင်ဆိုသောကြောင့် အကယ်ပင် အဘယ့်ကြောင့် သမိုင်းတွင် မရှိခဲ့ပါသနည်း။
၁၉။ ဂေါတမ၏ အခြား မယားများ အဘယ့်ကြောင့် မြုတ်ကွယ်ထားကြသနည်း။
မိန်းမ များခြင်း၊ မများခြင်းသည်.. တရားဓမ္မဆင်ခြင်သူအဖို့ မည်သို့အကျိုးရှိပါမည်နည်း..
၂၀။ မြင့်မိုရ်တောင်ဟူသည် ယနေ့တွေ့မြင်နိုင်ခြင်း အဘယ့်ကြောင့် မရှိရသနည်း။
ဟိန္ဒူအယူအစ စစ်စစ်.. အန်ကောဝတ်ဘုရားကျောင်းဟာ ဟိန္ဓူကြောင်း..မြင့်မြိုဟ်တောင်ပုံကိုယူပြီးတည်ထားတာ
၂၁။ ဤလောက စကြာဝဠာကြီး၏ အတိုင်းအရှည်ကို စာဖွဲ့တင်စားရန် အဘယ်သူသွား၍ တိုင်းထွာခဲ့သနည်း။
ကမ္ဘာ့အချင်း ကို ပေတံနဲ့တိုင်းတာလား.. နေနဲ့အကွာအဝေးကိုပေတံနဲ့တိုင်းတာလား..
၂၂။ အဘယ့်ကြောင့် ယနေ့ ရဟန္တာဟူသည် မရှိရသနည်း။
မရှိတာမဟုတ်ဘူး.. မင်းနဲ့မထိုက်လို့မင်းမသိတာပါ.. ။
April 14, 2012 at 11:51 PM Reply
စကားပြောကောင်းတဲ့ (....)ရေ... အပြောကောင်းတိုင်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့ဦး..
သင်တို့အဲလိုပြောမယ်ဆိုရင် သင်တို့ရဲ့ အရည်အချင်း စိတ်ဓာတ်ကိုဖော်ပြနေသလိုပဲ
အဲဒီ လျှပ်စီးတဲ့ကြိုးကိုကိုင်တွယ်ကြည့်မှ စီးကြောင်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်..
လေရှိတယ်ဆိုတာကိုရော သင်အဘယ်ကဲ့သို့သိပါသလဲ.. မမြင်မတွေ့ရဘူးလေ
သင်တို့ဘုရားက အဘယ်ကဲ့သို့ အနိစ္စရောက်ရသလဲ.. ဘုရားဆိုတာကတော့ အသက်မသေရဘူးပေါ့..
ထားလိုက်ပါတော့.. တစ်ခုပဲရှိတယ်... ဒီလိုမျိုး ဘလော့မျိုးမရေးသားခင် အရင်ဆုံးဆန်းစစ်ကြည့်ပါ..
Myanmar Elite Hacker says:
အမှန် အတိုင်းပြောရင် လူမုန်းများတယ် ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓ ဟာ ဘုရား မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး မင်းတို့ ကျွေးကြော်နေတာကို စဉ်းစားဥာဏ် ရှိတဲ့သူတွေ က သိနိုင်ပေမဲ့ အသိပညာ နဲပါးသေးတယ် နောင်လာနောင်သား ညီငယ် ညီမငယ်တွေ အတွက် ငါလူမုန်းခံပြောနေတာကွ။
လျှာမှာ အရိူးမရှိတိုင်း ရှောက်ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ အမှန်တွေ။ မင်းတို့ က ဘုရားရှိတာ စမ်းစစ် ဘူးလား - ဟုတ်လား။ အဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ စမ်းစစ် လက်ခံထားတဲ့ ထာဝရ ရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင် ဆိုတာ ဘယ်မှာလဲ ငါ့ကိုခေါ်ပြစမ်း။
ယောကျာင်္းတွေ ပြောနေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကိုယ့်စကားကိုယ်တည်ပါစေ။ မင်းရဲ့ သက်သေပြချက်ကို စောင့်နေမယ်။ အနဲဆူံး မင်းနာမည် လေး ထည့်သွားသင့်တယ်။
May 6, 2012 at 8:25 AM Reply
အပေါ်က Unknow ကောင် http://www.irrawaddyblog.com/ ကို မင်းရေးတာလား။ ငါတော့ စိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာသွားတယ်ဟေ့။
myanmar criterion says:
October 7, 2012 at 5:06 PM Reply
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မည်သည့် ဘာသာကို မှ မစော်ကား မရိုင်းပြဘူး။ လာလေ့လာလို့ ရတယ် ဆွေးနွေးလို့ ရတယ်။ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေးအတွက် တံခါးအမြဲဖွင့် ထားတယ်။ ခရစ်ယာန်နဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာတွေမှာ ဒီ အခွင့်အလမ်းတွေ မရှိပါဘူး။ လက်တွေ့ အနေနှင့် ဘန်ကောက်မြို့စွယ် ၂။ စူကိုဗစ်မှာရှိတဲ့ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းကို သူငယ်ချင်းနဲ့ ရောက်ဖူးပါတယ်။ ပထမ တော့ လူသစ်ဆိုတော့ မိတ်ဆက်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ နားထောင်ဆုတောင်းပေါ့။ ပြီးတော့ အလှူငွေထည့်ပေါ့။ အဲဒါတွေအပြီးပြန်ဖို့ အထွတ်မှာသူငယ်ချင်းကတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်ပေးနေချိန်မှာ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ ကရင်မတဦး( ယခုကနေဒါမှာ) မှ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ တွေအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခံရပါတယ် အဲဒီကထဲက ခရစ်ယာန်ကျောင်းတွေရဲ့ တံခါးပိတ်ဝါဒ ကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်။ အစ္စလာမ် ဆိုရင်တော့ သူတို့ ဗလီသွား ရ ဖို့ အနေသာ ကုံရာမ်ကျမ်းကို တောင် ပေးမကိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဘယ်ဘာသာ မဆို ကျမ်းစစ်ကျမ်းမှန်တွေကို လေ့လာခွင့် ဆွေးနွေးခွင့် ရှိမယ် ဘုရားကျောင်းတွေကို အနှောက်ယှက် မပေးပဲရိုးရိုးသားသားနဲ့ ဝင်ထွတ်ခွင့်ပြုမယ် ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်မဲ့အပြင် မှန်ကန်တဲ့ အနှစ်သာရရှိတဲ့ ဘာသာများဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။။
Cing theih niang says:
March 6, 2013 at 9:27 PM Reply
ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတိုင်းက ထိုကဲ့သို့ ပြုမူ ခြင်းမရှိပါ မိတ်ဆွေ.. သင် တစ်ခုတည်းသော နေရာကို သွးဖူးရုံနှင့် အရာခပ်သိမ်းကို ဆွဲသွင်းကား မသတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့.. ခရစ်ယာန်ဘာသာ မဟုတ်ရပါ.. ယေရူခရစ်တော် ကားတိုင်တွက် အသေခ့ခဲ့ခြင်းသည်.... လူသားတိုင်းအတွက်.. သာ ဖြစ်ပါသည်....... မှတ်ချက်.. ဒီလိုမျုိးရေးသားခြင်းမျိုးကို အထူးပင် အံသြ ၀မ်းနည်းရပါသည်.......... သူတစ်ပါး၏ ပြစ်ချက်ကို ရှာနေသမျှကာလပတ်လုံး အမှန်ဆိုတာ ထာဝရ ပျောက်ကွယ်နေအုံးမှာမို့ ထိုစိတ်ဓါတ်ကို ခဏဖယ်ကာ မျက်စီပွင့် နားပွင့် လေ ပိုကောင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်............
March 6, 2013 at 9:31 PM Reply
ဘုရားဂုဏ်တော် ငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံဘုရား မည်ကဲ့သို့သော ဘုရား ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ... မိတ်ဆွေ .. မိတ်ဆွေ တို့၏ တရားကျမ်းများတွင်လည်း လူမသိအောင် လျှို့ဝှက်ထားသော တရားတစ်ချို့ ရှိကြောင်း ကို သင်ကိုယ်တိုင် ပြည်လည်လေ့လာကြည့်ပါ...
Pround to be Buddhism says:
ဘယ်တရားတော်မှာ လည်းဆိုတာ လေးတော့ ညွှန်ပြစေလိုပါတယ်။ Buddhism မှာ Secret ဆိုတာ မရှိပါဘူး ။ ဂေါတမ က ဘယ်တော့ မှ Secret လုပ်မထားပါဘူး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နဲ့ လူပိန်း နာလည်အောင် ရှင်ပြထားတာပါ ။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းက လူတွေအားလုံး ကှို ဖိတ်ခေါ် ရဲတာပါ ။
ခရစ်ယာန် တို့ သည် အောက်တန်းကျသော စိတ်ဓါတ် ပိုင်ရှင်
သမ္မာ ကျမ်းစာတွင် ရှေ့ နောက် မဆီလျှော်သော အချက် ဘုရားသခင်သည် ပထမဆုံးနေ့မှာပင် အလင်းရောင်ကို ဖန်ဆင်းတော်မူပြီး အလင်းကို အမှောင်ထုမှ ခွဲထုတ်...
အကွဲ အလွဲ များနှင့် ခရစ်ယာန် သမ္မာ ကျမ်းစာ
ယနေ့ ခရစ်ယာန်တို့ အသုံးပြုနေသော သမ္မာကျမ်းသည် မူရင်းနှင့် မကွဲကြောင်း 1947 ဆားငန်အိုင် အနီးက ပြန်တွေ့ရှိသည် ဘီစီ 200 ခန့်က ကျမ်းဟောင်းများက ...
မွတ်စလာမ် ဘာသာဝင်များ အတွက် မေးခွန်းအချိူ့ 
နေရာ တစ်ကာမှာ ဖန်ဆင်းရှင် ဖန်ဆင်းရှင် နဲ့ စောက် ဖင်ခေါင်းကျယ် နေတဲ့ သူတောင်းစား ခွတ်ဆောင်း မွတ်စလာမ် ကုလား အချို့ ဖြေကြား ပေးစေချင်ပါတယ်။ ...
အမည် နာမ တစ်ခုအပေါ်တွင် ထားရှိသော စံချိန် စံညွန်းမျိူး ကမ္ဘာပေါ်တွင် မရှိ
ကျွန်တော် စာရေးသူ အမည် နာမ အပေါ် တွေးခေါ်ပုံကို ရှင်းလင်းပြောပြပါအူံးမယ်။ ကဲ စာဖက်သူရေ ---------- အမည် နာမ တစ်ခုကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ စံချိန် စံညွန်...
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင် ပြည်နယ် အတွင်းမှ အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက် မူဂျာဟစ် ဘင်ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်း
လူအခွင့်အရေးကို ဘန်းပြပြီး ရိုဟင်ဂျာအမည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ဖဲ့ထုတ်ရန် ကြိုးစားနေ ၁၄၀၄-ခု လေးမြို့ခေတ်၌ မင်းစောမွန် ဘုရင်လက်ထက် ရခို...
စာရေးသူ မယုံကြည် မကြည်ညိုသော ပုဂ္ဂိုလ် သူံးမျိူး
ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန် ဆိုတဲ့ ဆိုက်မှာ ဦးတည်ချက် ရောထွေးနေ တာ တွေ့ တွေ့ နေရပါတယ်။ ခွေးရူးတစ်ကောင် လိုပါဘဲ။ တွေ့ တဲ့ဟာ ကိုက...
အင်း - - - ဥာဏ်ကြီးရှင် ခရစ်ယာန်တွေ - - - - ခုထိ- - - - တခြား ဘာသာ အခြင်းခြင်း ရန်တိုက် ပေးနေတုံးပါလား - - - - - ထမိန်ခြုံမနေပါနဲ့တော့ကွာ...
ယုတ္တိ မတန်သော ကျမ်းစာ နှင့် ထာဝရ ဖန်ဆင်းရှင် ၏ ခြိမ်းခြောက် စကား
ယေရူ ၏ ခြိမ်းခြောက် စကား - - - - လူတိုင်း ဖွားမြင်ကတည်းက အပြစ်သားအဖြစ်လောကသို့ရောက်လာပြီးအပြစ်သားဖြစ်သည့်အတွက် အပြစ်ကိုသင်ပေးစရာမလိုပဲြ...
ခရစ်ယာန် တွေပြောတော့ ကုရ်အံ ကျမ်းစာ က သမ္မာ ကျမ်းစာ နဲ့ 70% တူပါသတဲ့
သမ္မာကျမ်းစာထက် နှစ်ပေါင်း ခြောက်ရာခန့် နောက်ကျနေပြီး သမ္မာကျမ်းစာနှင့် 70% ခန့် တူနေသည်ဟု သိရပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း ပြောဆိုသုံးနှုံးတဲ့ ဘာသာစ...
ရခိုင် သမိုင်း ပညာရှင် ဒေါက်တာ အေးချမ်း ၏ BBC နှင့် ဗြိတိသျှ ရိုဟင်ဂျာ အစည်းအရူံး ဥက္ကဌ ဦးထွန်းခင် ထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ချစ်စွာသော ဘီဘီစီ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ မနက်က ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းအစီစဉ်မှာ ဗြိတိန်ရိုဟင်ဂျာ အစည်းအရုံးရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဦးထွန်းခင်နဲ့ အင်...
ဘုရား နဲ့ တရား ဘယ်အရာ ပိုမြတ်ပါသလဲ
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်များသည် ဟပ်ချလောင်း မကြိုတ်ပါ
မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့သော ငရဲကြီးရှစ်ထပ် ရှိသည်ကိ...
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ညွှန်ပြ ခဲ့သော သတိပဋ္ဌာန်း တရားရှုမှတ်မှုအေ...
ကမ္ဘာ့ ပထမ အမြင့်ဆုံး ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်
ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ အမြင့်ဆုံး ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်
ကမ္ဘာ့ တတိယ အမြင့်ဆုံး ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်
ကိုးဘွဲ့ရ ဆရာတော်၏ ဒဿနစကားများ
ခရစ်ယာန် တို့ သည် အောက်တန်းကျသော စိတ်ဓါတ် ပိုင်ရှင...
မကောင်းမူတွေ အတွက် အဖြေပြန် မပေးနိုင် ကြဘူးလား
ဆွေးနွေး အဖြေရှာ တမလွန် ရေးရာ - - -
ကာလာမသုတ်တန်က ဒီလိုတွေ မဖြစ်ဖို့ဟောခဲ့
ဂိုဏ်းငယ် ၊ ဂိုဏ်ကြီး ဘယ်အချိန် ကျမ်းပြုကြသလဲ
ကွဲလွဲတာက ဒါ - - - -
ခရစ်ယာန် တွေပြောတော့ ကုရ်အံ ကျမ်းစာ က သမ္မာ ကျမ်းစာ...
လူမျိူးပြုတ် သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ယေရူ
ပြည့်တဆာမ မာဂဒလ မာရိနဲ့ လင်မယား ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ယေရူ
ကောင်းတာ ၊ မကောင်းတာ အားလူံး ယေရူ ဆီက
ကိူထူး ဆိုသည့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် မှ ယေရူ ကိုယ်စား ရိ...
Copyright © 2012 Knowing the Ture God | Powered by Myanmar Elite Hacker
We are attack for Islam and Christian (Especially: Tay Zar Aung) | Sponsored by Google - Friend with Ethical Hacker | General Public Licensed